Ajụjụ - Guangdong Honghua Construction Co., Ltd.
Kedu ihe bụ oghere ụzọ nchara ígwè?
Oghere Portal. Oghere Portal na-abụkarị akụkụ dị ala, gụnyere ogidi na ogwe osisi ma ọ bụ ntụhie, nke jikọtara site na njikọ na-eguzogide oge ...
Kedu ka esi arụ ụlọ ndị e ji ígwè rụọ?
Ngwongwo ígwè bụ usoro ụlọ nke nwere "ọkpụkpụ ọkpụkpụ" nke ogidi nchara kwụ ọtọ na osisi I-kwụ ọtọ, nke e wuru na ntanetị akụkụ anọ iji kwado ala, ụlọ na mgbidi nke ụlọ nke niile jikọtara ya na etiti ahụ. Mmepụta nke usoro a mere ka owuwu nke skyscraper kwe omume.
Gịnị mere eji eji ígwè arụ?
Maka nchara nchara nwere ọtụtụ uru. Nke mbu, ike di elu. Ogo dị elu nke ike na ibu (ike kwa ibu). Nke abuo, magburu onwe ductility na seismic eguzogide. Na-anagide nrụrụ dị ukwuu na-enweghị ọdịda ọbụlagodi nrụgide siri ike. Nke atọ, ekwedo ekwedo, ịdị n'otu. Predictability nke Njirimara, nso chepụta echiche. Nke anọ, ịdị mfe nke ịmepụta na ọsọ nke erection.
Olee otú iji gbochie metal ụlọ na mgbidi leaks nke ígwè Ọdịdị omumuihe?
Zọ kachasị mma iji kwụsị ihie mmiri bụ tupu ọ malite. Nke a bụ otu esi akwụsị ụlọ igwe na mgbidi:
1. Họrọ igwe ihe eji eme igwe dị elu. Emeghị usoro ụlọ nchara niile nhata. Dịka ọmụmaatụ, sistemụ ụlọ ụlọ RHINO, gụnyere ọtụtụ ihe eji egbochi mmiri emebere iji gbochie nsogbu ụlọ gị.
Nke mbu, azuma ahia anyi n’edetu ahia na egbochi nchedo nke oke mmiri ozuzo na snow.
Nke abuo, RHINO gunyere ogwe igwe ihe di nma nke 26-nleputa purlin (PBR) na ngwugwu ngwugwu, na enweghi ego ozo. Ogwe PBR na-enye ike dị ukwuu na ihe miri emi dị omimi n'etiti ogwe, maka nnukwu ụlọ siri ike karịa R-thinner na-eji ụlọ igwe emeghị ọnụ.
Nke ato, RHINO gunyere ihe nrịgo elu, nwupu onwe ya, ihe nchara na-eguzogide ya na washers na-adịte aka maka nchekwa mkpuchi ọzọ.
2. Wụnye kposara nke ọma. Enweghị usoro ihe ọ bụla na-emechi nke ọma ọ gwụla ma arụnyere kposara ndị ahụ n'ụzọ ziri ezi.
Nke mbụ, kposara ndị ahụ ga-akụ nchara ọla n'okpuru. Ọ bụrụ na ihe nkedo ahụ efunahụ purlin ma ọ bụ girt ahụ, onye na-asacha ihe anaghị ekpuchi, ọnyà agaghị ekwe omume.
Nke abuo, iji gbochie ihipu ihe nkedo nke onwe onye na-etinye nchara nchara na mgbidi mgbidi ga-egwu ya ogologo, ọ bụghị gbagọrọ agbagọ.
Nke ato, a gha agbachapu ahihia ya na ihe omimi di omimi. Ọ bụrụ na emechibidoro akara ahụ, enwere ike ijikọta ọnụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị tightened ezu, onye na-asacha ihe anaghị etolite uko akara, na ike ihihi.
Mgbe etinyere ma debe ya n'ụzọ ziri ezi, ihe nkedo RHINO ekwesịghị ịba ehi.